Global Voices teny Malagasy » Video: Roa volana fikatonana ao Kashmir · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Oktobra 2019 5:44 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsimo, India, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
lalana foana ao Kashmir. Pikantsary avy amin'ny tatitra lahatsary avy amin'i Basharat Amin, Lahatsary avy amin'ny mpifandray amin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers avy ao Kashmir.
Ny lahatsoratra dia avy amin'i Grace Jolliffe ary nipoitra voalohany tao amin'ny Video Volunteers , vondrom-piarahamonina fampitam-baovao voarafitra miorina ao India. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana kely araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Arabe tsy misy na inona na inona, tsy misy fiara fitaterana, servisy fiday tapatapaka, sekoly sy kolejy mikatona — mbola mangina tahaka ny fasana i Kashmir.
Mbola mangirifiry lalina ny fiainana andavanandro manerana ny lemaka raha miditra amin'ny andro faha-60, sady mbola tsy ahitana mangirana amin'izay hivahàny, ny fanidian'i India ny faritra tantaniny ao Jammy sy Kashmir.
Vakio ny pejy manokana an'i Global Voices: Ao anatin'ny krizin'i Kashmir 
Nitatitra i Basharat Amin, mpifandray amin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers, fa mikatona ny tsena, trano fivarotana ary fihariana madinika, tsy mbola hita eny an'arabe fitateram-bahoaka. Raha hita eny amin'ny zoron'arabe ny mpivaro-boankazo, mbola matahotra ny hivoaka ny trano ny mpivarotra akanjo. Mikatona ihany koa ny sekoly sy ny kolejy ary tahaka izany ihany koa ny biram-panjakana, hoy ny teny nanampian'i Basharat.
Mbola miato ny asam-banky ara-dalàna satria mbola mikatona avokoa ny banky. Voafetra ny vola mivoaka amin'ny milim-pamoaham-bola, manery ny olona hilahatra mandritra ny ora maromaro hahazoam-bola. Hita ho tsy raharahiana ireo kamiaobe feno zavatra ilaina andavanandro eo an-tsisindalana. Mihatra any amin'ny fihariana, fanabeazana, vonjy aina fitsaboana ary ny toekarena ankapobeny ny fay rano mihatra amin'izao fotoana izao.
Miezaka i Basharat hiantsafa amin'ireo olona te-hiteny ny fahasarotana atrehin-dry zareo. Saingy matahotra ny ankamaroany hilaza zavatra manoloana ny fakantsary ao anatin'izao tsy fahatombenana ara-politika izao.
Raha miandry ny hiverenan'ny fiainana milamina ny vahoaka ao Kashmir, dia mbola mitarazoka ny fahanginana.
Voatery mandefa ny lahatsary amin'ny alalan'ny olona iray tany Dehli ka io olona io no nandefa azy tany amin'ny Video Volunteers i Basharat. Jereo eto izany:
Nanatevin-daharana ny Video Volunteers i Basharat Amin  tamin'ny taona 2017 ho mpifandray amin'ilay vondrom-piarahamonina avy ao amin'ny distrikan'i Shopian ao Jammu & Kashmir. Nahazo diplaoman'ny Zon'Olombelona avy amin'ny Ivotoeran'ny Zon'Olombelona Indiana ao New Delhi izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/07/143734/
 nipoitra voalohany tao amin'ny Video Volunteers: https://www.videovolunteers.org/ground-reports-on-kashmir-lockdown-2/
 Ao anatin'ny krizin'i Kashmir: https://globalvoices.org/specialcoverage/inside-kashmirs-crisis/